အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတွေမှာ အခက်အခဲဆုံးအချက်က ခေါင်းထဲမှာတွေးထားတဲ့အရာကိုပါးစပ်က ထွက်လာဖို့ စကားလုံး ရှာမရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းက အင်္ဂလိပ်လို ပြောခါနီးတိုင်း မြန်မာလိုဘယ်လိုပြောမလဲကို အရင်စဉ်းစားတယ်။ ပြီးတော့မှ ခေါင်းထဲမှာ Translateလုပ်တယ်။ မြန်မာ့အတွေးနဲ့မြန်မာလိုတွေးပြီး အင်္ဂလိုပြောဖို့ ကြိုးစားတာပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သိပ်အလုပ်မဖြစ်တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ ဝါကျတွေဟာ သဘာဝကျမနေဘူး။ သူတို့နားထဲမှာတော့ နားလည်ကောင်းနားလည်သွားနုိုင်ပေမယ့် သဘာဝကျကျတော့ဖြစ်မနေပါဘူး။ နောက်ပြီး တစ်ခါတစ်လေ ခေါင်းထဲက မြန်မာလို သိပြီး အင်္ဂလိပ်လို ဖြောင့်အောင်မပြောတတ်တာမျိုးလည်း ခံစားလာရတယ်။
ကျွန်တော် ဘာမှားနေလဲ မသိခဲ့ဘူး။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဦးနှောက်ရဲ့ Default Settingက “မင်းမြန်မာလို စဉ်းစား..ပြီးရင် အဲ့ဒီစာလုံးတွေကို ဘာသာပြန်”လို့ ကိုယ်တောင် မသိလိုက်ပဲ ကိုယ့်ကို ခိုင်းနေတာပါ။ ဒီနေရာမှာ မေးစရာ တစ်ခုရှိလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ငယ်ငယ်တည်းက ငပိစားပြီး မွေးလာတာမြန်မာလို မတွေးပဲ ဘယ်လိုလုပ် အင်္ဂလိပ်လိုတွေးလို့ရမှာတုန်းဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။တွေးလို့ရပါတယ်။
ရုပ်ရှင်များများကြည့်ပါ။ အထူးသဖြင့် Dramaဇာတ်ကားတွေ၊ ဟာသကားတွေ၊ သူတို့ထဲကစကားပြောတွေဟာ တကယ့်နေ့စဉ်ဘဝ စကားပြောတွေနဲ့ အရမ်းနီးစပ်ပါတယ်။ အပြင်ဘဝမှာရှိတ်စပီယား ပြဇာတ်ထဲကလို ဘယ်သူမှမပြောကြပါဘူး။ မြန်မာတွေလည်း ရေသည် ပြဇာတ်ထဲက စကားမျိုး ဘယ်သူမှ မပြောကြပါဘူး။ တကယ်တမ်း လက်တွေ့ဘဝမှာ ဘယ်သူမှာ ကိုယ်တွေသင်ခဲ့ရတဲ့ ရှုပ်ထွေးရှည်လျားတဲ့ Complex Sentence တွေကို မသုံးကြပါဘူး။ ရံဖန်ရံခါသုံးနုိုင်ပေမယ့် အများအားဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ ပြောကြလေ့ရှိပါတယ်။
ကိုယ်က IELTSဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ အခုရေးနေတဲ့စာက IELTSတို့လို စာမေးပွဲဖြေချင်သူများအတွက် မဟုတ်ပါ။ လက်တွေ့ဘဝမှာ Practical English ကိုပြောပြီး Communicateလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူများအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတဲ့ အခက်အခဲကို အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်တွေအရမ်းကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်း၊ BBC Learning Englishက “The English We Speak”ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကို လေ့လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာကျော်လွန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်အရှည်ကြီး ပြောနေရတဲ့ ဝါကျတစ်ခုဟာ သူတို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျတော့ စကားလုံးနှစ်လုံးလောက်ပဲရှိပါတယ်။ ဥပမာ တစ်ခုပြောပြမယ်။ မြင်သွား အောင်ပါ။ David က It’s very hot todayလို့ သင့်ကိုပြောလိုက်တယ်။ သင်တို့က ခင်မင်ပြီးသားသူငယ်ချင်း ၂ယောက်ပဲ ဆိုကြပါစို့။ သင်ကလည်း သူပြောတာမှန်ကြောင်း ထောက်ခံချင်တယ်။ မှန်လိုက်လေကွာ.. ဆိုတာမျိုးပြောချင်တယ်။Yes, right it’s very hot. I’m feeling hot too. ဆိုပြီး ဘာညာသာရကာ ကိုယ်သိသလောက်ခေါင်းထဲကနေ ထွက်လာတာတွေကို သင့်တော်အောင်အင်္ဂလိပ်လို ပြောချလိုက်တယ်။
အဲ့လိုထွက်လာတယ်ဆိုရင် ကောင်းပါတယ်။ သင်အခြေအနေ တစ်ခုရောက်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်မှန်လိုက်လေ.. ငါလည်း ဒီလိုပဲ ခံစားနေရ တယ်။..မင်းပြောတာ မှန်လိုက်တာ..စတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေအတွက် တိုတိုလေးနဲ့ သဘာဝကျကျပြောနိုင်တဲ့ စကားလုံးက အင်္ဂလိပ်စကားမှာရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ‘Tell me about it! ပါ။ငါ့ကို အဲ့ဒီအကြောင်း ပြောပြစမ်းပါကွာလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
Tell ဆိုတဲ့ စကားလုံးရှေ့မှာ ‘ သင်္ကေတလေး ခံပေးထားတာအကြောင်းရှိပါတယ်။ Tell ဆိုတဲ့ အသံနေရာကို ဖိပြောစေချင်တာပါ။ Tellဆိုတဲ့ နေရာကို ဖိပြီး Tell me about it! လို့ပြောလိုက်ရင် မှန်လုိုက်လေကွာဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါက ဥပမာအနေနဲ့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမပြောသွားတဲ့ Yes, right it’s very hot. I’m feeling hottoo လည်း မှန်ပါတယ်ကွာလို့တော့ ကပ်သပ်မပြောပါနဲ့။ မှားတယ်လို့ ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုသဘာဝကျပြီး စဉ်းစားရာမှာ ပိုမြန်ဆန်စေချင်တာပါ။
တကယ်သုံးတဲ့ Expression တွေကိုလေ့လာထားတာကစကားပြောမှာ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းခြောက်လည်း သက်သာ စေပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆို စလေ့လာကာစက အင်္ဂလိပ်ရုပ်၇ှင်တွေထဲက အသုံးများတဲ့Expression တွေကို စာအုပ်လေးနဲ့ သက်သက် မှတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အခု နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်တာလည်း၅နှစ်လောက်ရှိနေပါပြီ။ ဘယ်သူမှ အရှည်ကြီး အရှုပ်ကြီးမပြောကြပါဘူး။
သုံးလေ့သုံးထရှိတဲ့ Expressionလေးတွေနဲ့ ပြောကြတာများပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေထဲကနေ ဘယ်လိုလေ့လာလို့ရလဲဆိုတာ ကိုလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ “အင်္ဂလိပ်စကား အမြန်ဆုံးပြောတတ်ဖို့”စာအုပ်ထဲမှာ အသေးစိတ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒီစာက သင့်ကို အခြားအရာတွေမလေ့လာနဲ့လို့ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူဆိုတာ ကိုယ်ဘာလိုချင်လဲ ကိုယ်သိရပါမယ်။ ကိုယ်ကအင်္ဂလိပ်လိုစာတွေရေးပြီး စာရေးဆရာဖြစ်ချင်တာလား၊ ကိုယ်က အင်္ဂလိပ်စာကို စကားပြောပြီး Communicate လုပ်ဖို့ လိုအပ်တာလား။ကိုယ်ဘယ်လောက်အထိလိုအပ်လဲ ကိုယ်သိရမယ်။ အဲ့ဒီကို သွားဖို့ဘယ်လမ်းကြောင်းက အမြန်ဆုံးလဲသိရမယ်။ သူများလုပ်တာတွေလိုက်မလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ်လိုအပ်တာကိုပဲ လုပ်ပါ။
Read 311 times Last modified on Wednesday, 15 May 2019 17:40